Fiompiana kisoa: betsaka ny ratsy sakafo sy mora andairan’ny pesta | NewsMada
Fiompiana kisoa: betsaka ny ratsy sakafo sy mora andairan’ny pesta
Par Taratra sur 06/01/2022
Fanadiahadina nampanaovin’ny Fida (Fonds international de développement agricole) amin’ny faritra maro eto Madagasikara no nahafantarana fa fidiram-bola ho an’ny tantsaha ny fiompiana ny kisoa. Saingy betsaka ny olana amin’izany fihariana izany.
Nofantarin’ny Fida ny fiompiana kisoa eto amin’ny Nosy. Fantarina, ohatra, izay fikambanan’ny tantsaha mpiompy mahazo famatsiam-bola, ny fiompiana amin’ny ankapobeny sy ny lalam-barotra. Tamin’izany no nahafantarana fa faharoa ny fiompiana kisoa amin’ny tetibidiny, ary fahatelo amin’ny isany. Ny ahitana izany betsaka ny faritra Analamanga, Bongolava, Alaotra, Boeny. Ahitana kisoa ny faritra hafa na vitsy aza. Marihina anefa fa hatramin’izao, mbola fiompiana nentin-drazana no mahazo laka, vitsy ny manaraka teknika, ary saika tratran’ny aretina pesta kisoa ny maro.
Ny lafy tsarany hita indray izao ny karazana kisoa metisy avy amin’ny fiombonan’ny « Landrace sy Large white ». Taona maro ny efa nampihatra an’io ny mpiompy, saingy amin’izao fotoana sarotra ny tena mamantatra karazana kisoa metisy, satria manomboka tsy voafehy ny fampiombonana azy. Latsaky ny 40 % ny karazana kisoa manome taranaka (fanadihadiana efa tamin’ny taona 2008), ankoatra izay, kisoa hatavezina, maharitra efa-bolana hatramin’ny herintaona, arakaraka ny karazany, ny toerana misy azy, ny sakafony, sy ny fitsaboana.
Mahantra ny ankamaroan’ny mpiompy malagasy, tsy ampy araka izany koa ny sakafo omena ireo biby, izay matetika ampombo, ambin-tsakafo sy potika taolana. Vitsy ny afaka manome mangahazo sy katsaka. Tsy manara-penitra koa ny toerana fametrahana azy ireo. Izay fahantran’ny mpiompy izay koa, tsy ahafahana miaro amin’ny karazana aretina, indrindra ny pesta (Peste Porcine Africaine). Fatiantoka ho an’ny mpiompy ny fandrimpahan’io aretina io tampoka ny kisoa.
Izay fitrangan’ny PPA izay avy hatrany, tsy ahafahan’ny maro miompy intsony. Izay no mahalafo ny hena kisoa eny an-tsena, satria mitombo hatrany ny masonkarenan’ny mpiompy , lasa sakafo lafo vidy ho an’ny Malagasy maro. Fehiny : lalam-pihariana lehibe ny fiompiana kisoa, ary betsaka mpanao, saingy mila fiofanana amin’ny lafiny rehetra (toerana, sakafo, fiarovana amin’ny aretina) ny mpiompy. Singa iray koa ny fahitana famatsiam-bola madinika.